Cleanroom ọnọde Manufacturers - China Cleanroom ọnọde Factory & Suppliers
Cleanroom Aluminom profaịlụ
Rabbet Glassdị Glass Magnesium Laminboard
Airlọ Airlọ Ọrụ Ahụike Airtight maka Opelọ Ọrụ
Njirimara Usoro nhazi nke ụzọ a dịka GMP na nchekwa chọrọ. Ọ bụ omenala akpaka ụzọ na imewe maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ, mpaghara ngalaba ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ ọta akara. Họrọ elu arụmọrụ brushless DC moto na obere size, nnukwu ike, obere mkpọtụ na ogologo ndụ. A na-ekpuchi gasketị dị elu dị elu na gburugburu ọnụ ụzọ, na-emechi ọnụ aka uwe mgbe emechiri, ya na ikuku ikuku dị mma. Pịnye ụdị ofdị nke nhọrọ Sanwichi panel Handicraft panel Wall door Wall thick (mm) ...
Asụsụ na Groove Hdị oghere MGO Board
Elu dị elu nke polyester, PVDF polyester na agba fluororesin. Enwere ike iji mpempe akwụkwọ mpịakọta ihu, galvanized mpempe akwụkwọ, # 304 igwe anaghị agba nchara, mpempe akwụkwọ aluminom-magnesium-managanese na alloy alloy. N'ihi ya, ọ nwere ezigbo mgbochi corrosion, acidproof, mgbochi crak, thermostability na ịka nká na-eguzogide. Isi ihe bụ A-klas ire ọkụ na-eguzogide ọgwụ (ma e wezụga akwụkwọ mmanụ abụ). E nweghị agbaze n'oge ọkụ ma ọ bụ elu okpomọkụ decomposing dripping. Dị ka a mbụ oke ngwaahịa o ...
Vetikalụ Na-ehicha Bench
A na-eji igbe Laminar eme ihe maka oge igbochi njikwa ịdị ọcha, dị ka forlọ Ọrụ Maka Mgbochi Mgbu, -lọ ọgwụ na-emepụta ọgwụ, ụlọ ọrụ nyocha sayensị. Ọ bụ ngwaọrụ nkewa iji gbochie mmetọ ikuku n'etiti ụlọ dị ọcha. Principlewa ụkpụrụ: mgbe ọ bụla ọnụ ụzọ nke ala ọkwa dị ọcha-ụlọ na-emeghe, ngafe-igbe na-aga na-ezite laminar eruba na iyo airborne ahụ si workspace ikuku na onye ofufe na HEPA, iji hụ na ikuku nke elu ọkwa ọcha-ụlọ bụ abụghị co ...
Urelọ Ntuhie Na-adịghị Mma
Ogige Laboratory niile nke ígwè
A na-eji nlezianya ejiri ụlọ ọrụ ígwè ụlọ nyocha ụlọ niile nke ígwè rụọ nke ọma site na usoro nke usoro ịkwa akwa, ikwe, ịgbado ọkụ, ịpị ma na-ere ọkụ na site na epoxy powder corrosion-resistance treatment. Ọ bụ waterproof, bacteriostatic, na mfe ọcha.